आज : २०७४ चैत ८ बिहीबार
स्टुडियो टाईम : ०३:२६
महाकाली नदी किनारमा बन्दै नमुना तटबन्ध ,३ अर्बभन्दा बढी प्रक्षेपण डेढ अर्बबढी खर्च
शब गाडेको एकहप्ता पश्चात् पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पतालमा ।।
राजश्व बढाउँदै संरक्षण क्षेत्र दार्चुलाले
यी हुन् विमान दुर्घटनामा परेका बंगलादेशमा अध्ययनरत मेडिकल विद्यार्थी
अपडेटः यूएस बंगला विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ४९ पुग्यो, २१ घाइते
चमेलियाबाट दैनिक ६ घण्टा विद्युत उत्पादन गरिदै,, चमेलियाको उद्घाटन भयो तर हस्तान्तरण बाँकी।।
खोतिला पहिरोमा दुई देशका अधिकारीको स्थलगत निरीक्षण, दुई दिनभित्र आफ्नोतर्फको निस्कर्ष दिने भारतको सिचाई विभागको भनाई ।।
महिलाहिसां मुक्त आखीर कहिले त ?
अपिनाम्पा संरषण क्षेत्र भित्रका बिसवटा विद्यालयमा अपिनाम्पाको २५ लाख बजेट
काठेपुल सञ्चालन केन्द्र सरकारको अनुमतिपछि मात्रै सञ्चलन गर्न पाउने ।।
मिडिया क्ष्ोत्रको विकास र विस्तारका लागि त्रिmयासिल रहने र ग्रामिण्ा भेगका नागरिकको सुचनाको सेवामा त्रिmयासिल रहने उद्देश्यले स्थापित सामाजिक संस्था हो । सामुदायिक रेडियोको सञ्चालन, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शीतासम्बन्धि कार्यत्रmम र मिडिया सम्बन्धि विविध कार्य मिडिया विकास समाज नेपालले गर्दै आएको छ ।
दाचर्ुलामा कार्यरत पत्रकारहरुले आफ्नैा पहल र त्रिmयासिलतामा २०६५ सालमा यस संस्थाको स्थापना गरेका हुन् । मिडिया विकास समाज नेपालमा पत्रकारिता क्ष्ोत्रमा त्रिmयासिल व्यत्तmिहरु आवद्ध छन् ।
संस्थाको १३ सदस्यीय कार्य समिति रहेको छ भने संस्थामा २८ जना साधारण्ा सदस्य रहेका छन् । वर्तमान कार्य समितिमा अध्यक्ष पदम बडाल, कार्यकारी निर्देशक शङ्करसिह धामी, उपाध्यक्ष मदनसिह धामी, महासचिव भुवन डागा, सचिव लोकेन्द्र बहादुर बम, कोषाध्यक्ष कलावती धामी, सदस्यहरु, पुष्कर लोहार, मिनबहादुर धामी, महेश बुढाथोकी, विरेन्द्रसिह महरा, कलावती बोहरा, प्रतापसिह ठगुन्ना त्यस्तै लेखा समितिमा श्यामसिह सामन्त, अर्जुनसिह ठगुन्ना
रेडियो नयाँ नेपाल
मिडिया विकास समाज नेपालåारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोको नाम नयाँ नेपाल एफएम हो । संस्थाको उद्देश्यअनुसार नागरिकको सुचनामा पहुँच विस्तार गर्न एवं समुदायको सेवा गर्न सामुदायिक रेडियोको स्थापना गरिएको हो । २०६७ मंसिर १५ गतेदेखि परीक्ष्ाण्ा प्रशारण्ा प्रारम्भ गरी हाल रेडियोको नियमित प्रशारण्ा भइरहेको छ । हाल रेडियोको प्रशारण्ा क्ष्ामता १०० वाट रहेको छ भने दैनिक रुपमा १८ घण्टा (विहान ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म) प्रशारण्ा भइरहेको छ ।
रेडियो सञ्चालनको जिम्मेवारी मिडिया विकास समाज नेपालको कार्य समितिको रहेको छ । रेडियोको सञ्चालन बोर्डको रुपमा समितिले काम गरिरहेको छ । रेडियोमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी तथा रेडियोकर्मीको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
समुदाय र नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहदै रेडियो सञ्चालन गरिदैआएको छ । समुदायका सन्देश, समाचार र खबर तथा स्थानीय भाष्ाा, संस्क ृति र कलाको क्ष्ोत्रमा रेडियोले भूमिका निर्वाह गर्दैआइरहेको छ । आवश्यकताअनुसार जिल्ला, राष्टि्रय र अन्तर्राष्टि्रय क्ष्ोत्रका खबर पनि समुदायमाभm रेडियोले प्रस्तुत गर्दैआएको छ । रेडियोमा उज्यालो नेशनल नेटवर्क (युएनएन) र सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सिआइएन) जोडिएको छ भने बिबिसी नेपाली सेवा पनि प्रशारण्ा हुँदैआएको छ ।
रेडियोबाट कस्ता कार्यत्रmम प्रशारण्ा हुन्छन् ?
सामुदायिक रेडियो नयाँ नेपाल एफएमबाट स्थानीय समाचार, सुचना र मनोरन्जनका कार्यत्रmम प्रशारण्ा भइरहेका छन् । स्थानीय र नागरिक सरोकारका विष्ायलार्इ हामी रेडियोमाफत प्रस्तुत गर्दैआइरहेका छौ । स्थानीय संस्क ृतिको जगेर्ना गनर्े, समुदायको पहिचान र मौलिकतालार्इ सम्व ृद्ध बनाउने कार्यमा हामी त्रिmयासिल छौ । यसका साथै समसामयिक राष्टि्रय तथा अन्तर्राष्टि्रय महत्वका विष्ायले पनि रेडियोमा स्थान पाइरहेका छन् ।
के के कार्यत्रmम छन् रेडियोमा ?
सामुदायिक रेडियोबाट प्रशारण्ा हुने विभिन्न लोकपि्रय कार्यत्रmम रहेका छन् । नियमित स्थानीय समाचार बुलेटिनहरु, हाम्रो सरोकार कार्यत्रmम, आजको सन्दर्भ, हेलो दाचर्ुला, स्रोता सन्देश, अनुरोध संगीतलगायतका कार्यत्रmम रेडियोबाट दैनिक रुपमा प्रशारण्ा भइरहेका छन् । यसैगरी गजल गंगा, खुल्दुली, बदलिदो आकाश जस्ता साप्ताहिक कार्यत्रmमले स्रोताको मन जितिरहेको छ ।
नाम :Ram singh Dhami
ठेगाना : rojandhami143@Gmail.com
पद : Station Manager
नाम :Padam singh Badal
ठेगाना : badalpadam@gmail.com
नाम :Dave singh Bist
ठेगाना : nayanepalfm@gmail.com
नाम :Rajendra singh Bist
नाम :Shankar singh Dhami
ठेगाना : shankar.dhami@gmail.com
पद : M D nayanepal fm
नाम :Laxman singh Dhami
नाम :Uddab singh Dhami
ठेगाना : dhami.uddab@gmail.com
पद : Anchor
नाम :Gagan Singh Bist
ठेगाना : gaganbistaa@gmil.com
पद : Chief Of Market
नाम :Iswari Budhathoki
नाम :Shantosh Singh Kottari
ठेगाना : santosh.spandan123@gmail.com
नाम :manju kalyal
ठेगाना : Darchula
राष्ट्रगान प्रारम्भ 04:55 am - 05:00 am
धार्मीक अनुष्ठान 05:05 am - 05:50 am
सुचना डायरी 05:50 am - 06:00 am
सझा खबर 06:00 am - 06:30 am
शुभ विहानाी÷राशिफल 06:30 am - 06:55 am
खबर प्रभात 07:00 am - 07:10 am
बिबिसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
हाम्रो सरोकार 07:30 am - 08:00 am
रङ भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
नेपाल खवर 09:00 am - 09:10 am
बिहानी कार्यक्रम 09:15 am - 09:55 am
नयाँ खवर 10:00 am - 10:10 am
हेलो दार्चुला 10:15 am - 10:55 am
नयाँ खवर 11:00 am - 11:15 am
आधुनिक गीतहरु 11:20 am - 11:55 am
नेपाल खवर 12:00 pm - 12:10 pm
पप गितहरु 12:20 pm - 12:55 pm
नयाँ खवर 1:00 pm - 1:15 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 1:20 pm - 1:55 pm
हिन्दी समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
लोक दोहोरी गीत 2:20 pm - 2:55 pm
नेपाल खवर 3:00 pm - 3:10 pm
स्रोता सन्देश 3:15 pm - 3:55 pm
नयाँ खबर 4:00 pm - 4:15 pm
हाम्रो सरोकारको पुनः प्रशारण 4:30 pm - 4:55 pm
नयाँ खबर 5:00 pm - 5:10 pm
भन्नीछिन आमा 5:30 pm - 5:55 pm
नेपाल खवर 6:00 pm - 6:10 pm
डोटेल्ली गीतहरु 6:20 pm - 6:55 pm
खवर सन्ध्या 7:00 pm - 7:25 pm
साझा खवर 7:30 pm - 7:55 pm
खबर अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
हुक्का चिलीम 8:10 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
गजलको कार्यकम 9:15 pm - 9:55 pm
खवर चेक 10:00 pm - 10:15 pm
सदाबहार गीतहरु 10:20 pm - 10:55 pm
समापन 11:00 pm - 11:05 pm